Carewell SEIU 503 | Caawinta kharashka daryeelka caafimaadka ee qorshayaasha la ansixiyay
Ceymisyada La Ansaxiyay
Caafimaad qab, dabool na qado.
Carewell SEIU 503 Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxay caawisaa shaqaalaha xaqa u leh ee ku jiran kuwa caymiska ee caafimaadka ee la ansixiyay ee qorshayaasha suuqa:
Kharashka saafiga ah ee khidmadaada caymiskabil’laha ah (ka eeg FAQ sharaaxada).
Kharashyada jeebkada laga bixiyo sida kuwa lagaa jarayo, khidmada ceymiska iyo lacagaha haraaga lacag jarista kadib iyo kharashyada daawada dhaktarku qoro ee adeegyada lagu dabaro qorshahaaga ceymiska ee la oggolaaday. Ilaa iyo $6,600 oo ah kharashka qofka jaabkiisa ka bixiyo ayaa la dabaraa 2022.
Dheeftan waxay shaqaynaysaa oo kaliya haddii aad ka diiwaangashan tahay caymiska Goob-suuqeedka la oggalyahay (eeg liiska caymisyada la oggalyahay).
Sikastaba ha ahaatee, haddii
aad xaq u yeelatay dheefaha Carewell SEIU 503 (sida Ilkaha, Aragga + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawimaadda Shaqaalaha) ka dib markay dhamaatay Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee ugu danbaysay, iyo
aad ka diiwaanshan tahay caymis aan la oggolayn oo aad ka heshay Goob-suuqeedka caymiska caafimaadka,
waxaad heli kartaa Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka oo ku meel gaadh ah si lagaaga caawiyo kharashyadaada khidmada bil’laha ah iyo kharashyada jaabka laga bixiyo ee caymiskaaga caafimaadka ee hadda jira. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa FAQ-yadan.
Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaad waxaa kaliya oo heli kara shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqalaha shakhsiga, ee ma helaan xubnaha qoyska. Haddii qoyskaaga lagu daro siyaasaddaada caymiska caafimaadka, Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxa ay dabooli doontaa oo keliya qaybta khidmadaha bisha ee khuseeya caymiskaaga gaarka ah. Macluumaad intaas ka badan waxaa laga heli karaa qaybta Isticmaal Dheeftan ee hoose.
Haddii aad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waxaad heli doontaa Kaarka Dheefta kuwu habboon (kaarka deynta Mastercard) si aad isaga bixiso khidmadahaaga bisha iyo kharashyada jeebka ka baxsan. Kaarku waxa uu ka iman doonaa Ameriflex (Maamulaha Habboon ee Faa’iidooyinka). Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta iyo sida loo isticmaalo, guji halkaan.
Fiiro Gaar ah: Macluumaadka cusboonaysiinta ee dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee ka diiwaangashan qorshayaasha caymiska Goob-Suuqeedka ee la oggolaaday ayaa laga heli karaa qaybta hoose ee Diiwaangelinta
Faa’iidonka waxay bixisaa khidmadaha saafiga ah ee bilaha ah ee u qalmida qorshayaasha shakhsi ahaaneed ee lagu soo gato Suuqa. Waxay kale oo ay ka dabooshaa ilaa $6,600 kharashaadka caafimaadka ee jeebka laga bixiyo ee sheegashooyinka uu daboolay qorshahaaga shaqsiga 2022 ee la ansixiyay. Carewell SEIU 503 Faa’iidooyinka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaad maaha kuwo shaqalaha-kafaala qaaday ama kooxda caymiska caafimaadka.
Markaad isdiiwaangeliso Suuqa Caymiska Caafimaadka ayaa ku siin doona qorshayaal dhowr ah oo aad ka doorato. Waxaad dooran kartaa qorshe kasta oo aad rabto, laakiin si aad u hesho dheefaha, Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaad, waa inaad iska diiwaan gelisaa qorshaha la ansixiyay ee degaankaaga.
Ameriflex ayaa boostada kuugu soo diri doonta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta oo aad u isticmaali karto inaad ku bixiso khidmadahaaga caymiska bil’laha ah. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inaad ku bixiso kharashyadaada khidmadaha adegga ceymiska, kharashyada lacagaha haraaga lacag jarista kadib, iyo daawoyinka dhakhtarku qoro ee aad xaqa u leedahay.
Eeg Xaq u Yelashada
Macluumaadkan waxaa loogu talagalay dadka u qalma oo u baahan inay iska diiwaangeliyaan qorshe la oggolaaday oo ku saabsan Suuqa Daryeelka Caafimaadka.
Si aad u aragto haddii aad u qalanto, fadlan buuxi su’aalahan u-qalmitaanka.
Haddii aad iska diiwaangelinayso qorshaha caymiska Goob-suuqeedka markii ugu horreysay, waxaad u badan doonto inaad sugto ilaa inta Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah si aad isku diwaangeliso. Sanadkaan, Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah waxay u dhaxeysaa Nofeeembar1 iyo Janaayo 15. Caymiska bilaabanaya Janaayo 1, 2022, waxaad u baahan doontaa inaad isdiiwaangeliso ka hor Diseembar 15. Haddii aad isdiiwaangeliso Diseembar 16 iyo Janaayo 15, caymiskaaga wuxuu bilaaban doonaa Febraayo 1, 2022. Xaalado gaar ah ayaa kuu oggolaan kara inaad isdiiwaangeliso muddo ka baxsan wakhtigaan, inta lagu jiro waxa loo yaqaano Muddada Qoritsa Gaarka ah (“SEP”)
Muddada Isdiiwaangelinta Gaarka ah (SEP)
Diiwaangelinta Furan ee ka baxsan, waxaa jira waxyaabo ka reeban oo xaddidan oo kuu ogolaanaya inaad isdiiwaangeliso inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah. Tusaale ahaan, haddii aad iska lumisay caymiskaaga qorshaha lammaanahaaga ama loo-shaqeeyaha kale, ama aad lumisay caymiska Medicaid, waxaa laga yaabaa inaad u qalanto inaad iska diwaangeliso meel ka baxsan Diiwaangelinta Furan. Xilliyada Isdiiwaangelinta Gaarka ah waxay ku eg tahay 60 maalmood oo keliya laga bilaabo taariikhda dhacdada u qalmidda (sida joojinta caymiska), markaa haddii aad aaminsan tahay inaad u qalanto SEP, wac 1-844-503-7348 isla markaaba. Fiiri Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Xilliyada Diiwaangelinta Gaarka ah.
Haddii aad isku diiwaangelinayso ceymiska Goob-Suuqeedka la ansixiyay iyo dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka marki ugu horaysay, fadlan hoos u bax si aad u aragto Tallaabooyinka La Isku Diiwaangeliyo oo ka hooseysa liiska Talaabooyinka Cusboonaysiinta.
Caymiska caafimaadka ee Goob-suuqeedka waxaa dib loo cusboonaysiiyaa inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah.
Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee caymiska 2022 waxay dhamaatay Janaayo 15.
Si aad u sii wado inaad hesho Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell, waa inaad buuxiso:
Warqadaha sannadlaha ah ee loo baahan yahay ee 2022 – foomamkani waxay kooxda Carewell SEIU 503 Benefits iyo la-hawlgalayaasheeda ogolaanshaha u siinayaan inay kaa caawiyaan diiwaangelinta iyo ilaalinta caymiskaaga daryeelka caafimaadka.
Foomka Macluumaadka Diiwaangelinta (EIF) si aad noo ogeysiiso khidmadahaaga cusub iyo canshuur celinta khidmadaha ee hormariska ah ee 2022.
Halkee ka heli kartaa macluumaadkan?
Weydii shirkaddaada caymiska caafimaadka (sida Kaiser ama Providence) – waxaa laga yaabaa in macluumaadkaas ay kuugu soo direen boostada, ama waxaa laga yaabaa in laga heli karo boggaaga internetka. Sidoo kale waad wici kartaa – lambarada shirkaddaha waxaa laga heli karaa halkan
Ka gal codsigaaga Goob-suuqeedka barta healthcare.gov ama wahealthplanfinder.org ee Washington
Hal mar oo aad gujiso ku wada buuxi warqadaha sannadlaha ah ee 2022 iyo EIF
Buuxi kaliya EIF (haddii aad kol hore buuxisay warqadaha sannadlaha ah ee 2022)
Dhammaan daryeel bixiyayaasha waxay heleen mushahar kordhin oo dhaqan galaysa laga blaabo Janaayo 1, 2022, taas oo ka dhigan inaad u baahan doonto inaad ka cusboonaysiiso dakhligaaga codsigaaga Goob-suuqeedka ee 2022. Waynu kaa caawin karnaa midaas! Naga soo wac lambarka 1-844-503-7348 si aad ballan ula dhigato Valley Insurance Professionals oo ku saabsan cusboonaysiinta dahkligaaga.
Dhammaan tillaabooyinka liiska ku qoran waa in la dhammaystiro si aad isu diiwaan geliso Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.
Buuxi waraaqaha loo baahan yahay ee 2022
Warqadaha Sannadlaha ah ee 2022 (Oregon iyo Washington).
Ka raadi qorshe la ansixiyay oo degaankaaga ah liiska qorshooyinka oo qor magaca qorshaha iyo lambarka
Si aad u hesho dheefaha Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waa inaad iska diiwaan gelisaa qorshaha la ansixiyay ee degaankaaga.
Si aad iskaga diiwaangeliso qorshaha ceymiska Goob-Suuqeedka ee ee la oggolyahay
Naga soo wac 1-844-503-7348 si aad ballanta isdiiwaangelinta uga qabsato, hay’adda caymiska ee nala-hawlgasho, Valley Insurance Professionals.
Bixi khidmadaha bisha ugu horreysa shirkaddaada caymiska ka hor taariikhda kama dambaysta ah
Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso khidmadaha ugu horreeya ee lacagtaada, waxaana laguu soo celin doonaa qaddarka saafiga ah ee caymiska ee aad bixisay. Waxaad markaas heli doontaa kaadhka waxtarka leh ee lacagaha mustaqbalka. U deji lacag-bixinno otomaatig ah sidahaaga caymiska adoo isticmaalaya Kaarka Dheefta ku habboon si aad uga fogaato lacagaha maqan. Qorshahaaga lama hawlgelin doono waxaana laga yaabaa inaad waayi doonto caymiska inta ka hadhay sanadka haddii aanad ku bixiniin lacagta bisha ugu horreysa waqtigii loogu talagalay.
Si aad dhaqso ugu soo celiso lacagta magdhow ah khidmadaha koowaad, waxaad isku qori kartaa deebaaji toos ah.
Foomka Lacag Dhigashada Tooska ah (Dijital
Hubi inaad akhrido oo aad ka jawaabto boostadaada Suuqa
Haddii aadan ka jawaabin codsiga goobta Suuqa ee macluumaadka, waxaa laga yaabaa inaad lumiso caymiskaaga, Dhibcaha Canshuurta Lacagta Hormarka, iyo Gargaarka Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Fadlan kala soco boostadaada iyo iimaylkaaga ogeysiisyada Suuqa.
Waxaad ogaan doontaa inaad ka diiwaangashan tahay Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka marka aad ka hesho Kaarkayga Dukaameysiga ee Dheefta (BCC) boostada. Laga bilaabo maalinta isdiiwaangelinta, waxay qaadan kartaa ilaa iyo 20 maalmood oo shaqo inaad boostada ku hesho BCC. Sidoo kale waa inaad hesho magdhawga khidmadaada ugu horeysa, oo aad ku hesho jeeg ama lacag wareejinta elektrooniga ah midkood, 20 maalmood oo shaqo gudahooda markaad isdiiwaangeliso.
Haddii aad qabto su’aalo ku saabsan diiwaangelinta iyo gelitaanka Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, fadlan wac 1-844-503-7348.
Isticmaal kaadhkaaga waxtarka leh si aad ugu bixiso caymiskaaga:
Kharashyada jeebka laga bixiyo ( lacagaha la jaro, khidmada ceymiska, lacagaha haraaga lacag jarista kadib iyo daawada dhaktarku qoro)
Waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo wa inaad muujiso caddaynta kharashyadaada, markaa hayso Sharaxaadda Faa’iidooyinka aad ka heshay side caymiskaaga iyo dhammaan rasiidhada.
Kaarka looma isticmaali karo:
daryeelka ilkaha ama adeegyada aragga iyo maqalka;
kharashka xaaskaaga ama kuwa kugu tiirsan;
kharashyada adeegyada qorshahaaga caymiska caafimaad uusan dabarin;
kharashyada la galay inta aanad u qalmin Caawimada Kharashka Daryeelka Caafimaadka;
kharashyada daawaynta ee laga soo bilaabo kallandarka hore. Ka eeg tabkan Lacag-celinta wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii qoyskaagu uu ku jiro siyaasadda caymiskaaga caafimaadka, ma awoodi doontid inaad u isticmaasho Kaarka lacag-bixintaada caymiska. Waxaad u baahan doontaa inaad bixiso lacagta caymiskaaga adigoo isticmaalaya lacagahaaga ka dibna aad codsato lacag celin bil kasta. Ka eeg tabka Lacag-celinta wixii macluumaad dheeraad ah.
Ka hagaajiso lacag bixintaada tooska ah shirkadaada caymiska
Hubi in lacagta caymiskaaga lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay bil kasta! La xidhiidh shirkadaada caymiska si aad ugu hagaajiso lacag bixinta tooska ah ee Kaarkaaga Dukaamaysiga ee Dheefta:
Kaysar: Booqowebsaydhka Kaiser Permanente.
PacificSource: Booqo PacificSource website.
Providence: Ka wac biilasha Providence 1-503-574-5791 ama ku bixi lacagtaada khadka tooska ah – markii ugu horeysay lacag-bixinaha khidmadaha ah isticmaal lingan oo dooro shaqsi iyo codsade qoys cusub.
Regence: Ka wac adegga macaamiisha ee Regence lambarka 1-888-675-6570 ama booqo websaydhka Regence.
Kahor intaadan ballan la qabsaneen bixiye caafimaad, hubi inay ku jiraan shabakada bixiyaha caymiskaaga. Haddii aad adeegyo ka hesho bixiyeyaasha shabakadaha ka baxsan, waxaad geli doontaa kharashyo jeebka ka baxsan oo aad uga sarreeya.
Si loo hubiyo inaad sii wadato helitaanka Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka, fadlan xasuuso inaad:
Si joogta ah u soo gudbiso warqadahaaga saacadaha la shaqeeyay iyo/ama foojarada mushhaharka.
Iska ilaaliso inaad soo diiwaangeliso eber saacadood oo ah kuwa shaqo laba bilood oo isku xigta. Inaad laba bilood oo isku xigta shaqo la’aan ahaato waxay kuu horseedi kartaa inaad lumiso dheefahaaga Carewell SEIU 503, oo ay ku jirto Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Xaaladdaan, waxaad weli sii haysan doontaa qorshahaaga caymiska Goob-Suuqeedka laakiin waa inaad adigu bilowdaa inaad iska bixiso khidmadaha ama aad raadsato caymis kale sida Oregon Health Plan.
Ka dhigto tii ugu danbeeyay xogtaada khaaska ee ay hayaan Carewell SEIU 503 iyo loo-shaqeeyahaaga.
Ku siiso khidmadahaaga caymiska bil’laha ah shirkada caymiska waqtigii loogu talagalay, oo aad la socoto lacagahaaga khidmada ceymiska ee bil’laha ah. Shirkadaada caymiska ayaa joojin karta qorshahaaga caymsika haddii lacagaha la bixin waayo.
Ugu soo gudbiso Goob-Suuqeedka Isbeddel kasta oo ku yimaadda macluumaadkaaga 60 maalmood gudahood. Waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawino midan… wac 1-844-503-7348 wixii kaalmo ah.
Inaad la socoto xaraynta cashuurtaada.
Sida ugu dhakhsiyaha badan ee aad ku heli karto lacag celintaada waa adiga oo buuxiya foomamka soo socda onlayn!
Foomka Sheegashada Magdhawga Caafimaadka (Digital)
U isticmaal Foomka Sheegashada Lacag-celinta Caafimaadka ee:
Lacag-celinta qaddarka ah haddii aad ka diiwaangashan tahay xubnaha qoyska ee qorshahaaga. Waxa kaliya oo aad sheegan kartaa qaybta lacagta caymiska ee u dhiganta caymiskaaga gaarka ah. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo xisaabinta qaddarka khidmadaha gaarka ah, la xidhiidh Suuqa (1-800-318-2596), sidahaaga caymiska, ama Xirfadlayaasha Caymiska Dooxada (1-844-507-7554, doorashada 2). Fadlan soo gudbi foomkan iyo koobiga lacagta caymiska bil kasta.
Dalbashada lacag celinta wixii ka dambeeya Maarso 31 ee kharashaadka u qalma laga soo bilaabo taariikhdii hore.
Foomka Lacag-celinta Ameriflex (Digital)
Isticmaal Foomka Lacag-celinta Ameriflex si aad u dalbato lacag celin:
Marka aad jaabkaaga ka bixiso kharash xaq leh baddelki aad isticmaali lahayd Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta. Tusaale ahaan, haddii aad jaabkaaga ka bixisay daawada dhaktarku uu qoro adigaa oo aan wadanin Kaarkaaga wakhtigaas.
Dalbashada lacag celinta ilaa iyo 31-ka Maarso ee kharashaadka u qalma laga soo bilaabo sanad dugsiyeedkii hore.
Macluumaadka Xiriirka iyo Kheyraadka
2022 Oregon county reference guide for Approved Plans (Hagaha tixraaca degmada Oregon ee Ceymisyada La Oggolyahay ee 2022) (PDF)
Riix halkan si aad u aragto dhammaan khayraadka Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka
Si aad ballan uga qabsato Valley Insurance Professionals, fadlan wac 1-844-503-7348, ama iimayl u dir carewellseiu503benefits@risepartnership.com.
Waxaad sidoo kale wici kartaa lambarkaas ama wax u diri kartaa iimaylkaas sababaha soo socda awgood:
Kaalmada lagu go’aaminayo dariiqa lagu diiwaan geliyo caymiska caafimaadka
Kaalmada codsiyada OHP
Caawimada aasaasiga ah ee dheefaha Carewell SEIU 503
Xaqiiji u-qalmitaankaaga iyo diiwaangelinta Caawinta Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell SEIU 503
Su’aalaha ku saabsan lacag celinta
Sababaha loola xidhiidho Valley Insurance Professionals:
Su’aalaha ku saabsan goobta isdiiwaangelinta ama kaalmada telefoonka
Si loo sameeyo mid ka mid ah isbeddellada soo socda ee Suuqa:
Sax wixii macluumaad shakhsi ahaaneed (magaca, taariikhda dhalashada, dakhliga ama ciwaanka)
Ku dar ama ka saar kuwa kuugu tiirsan iyada oo ay sabab u tahay uurka, dhalashada, korsashada, guurka, furiinka ama dhimashada
Beddel heerkaaga (naafanimada, canshuur celinta, dhalashada, qabiilka, xabsiga)
Isbeddelka caymiska caafimaadka (tusaale ahaan, haddii caynsanaanta lagugu soo bandhigay shaqo ama aad ka bilawday Medicaid)
Kaalmada soo gudbinta dukumentiyada ay codsatay Marketplace
Xasuus: Ha wicin Valley Insurance Professionals si aad ballan ula sameysato. Taa beddelkeeda, fadlan wac 1-844-503-7348, ama iimayl u dir carewellseiu503benefits@risepartnership.com.
Sababaha loola xiriiro Goob-Suuqeedka federaalka:
Soo hel qaddarka kiridhityada canshuurta ee laga yaabo inaad hesho, iyo sidoo kale guud iyo khidmadaha caymiska caafimaadka saafiga ah
Codso nuqullada foomkaaga 1095 ee sannadlaha ah
Xasuus: Isdiiwaan gelinta iyo isbeddelada nolosha, waxaanu kugula talinaynaa inaad is-diiwaangeliso oo aad soo wargeliso isbeddellada nolosha Valley Insurance Professionals si loo hubiyo in macluumaadkaaga sidoo kale loo gudbiyo Xafiiska Maamulka Dheefaha
Sababaha loola xidhiidho bixiyaha caymiska:
Samee lacag bixin toos ah
Hel kaadhadhka aqoonsiga caymiska cusub
Su’aalaha ku saabsan biilasha
Xaqiiji haddii dhakhtarkaaga ama nidaam gaar ah la daboolay
Kaiser Permanente: 1-800-813-2000
MODA Medical: 1-877-605-3229
Macluumaadka xiriirka ee Moda Health
PacificSource (Oregon): 1-888-977-9299
Markaad soo wacayso, fadlan isu sheeg inaad tahay shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee helaya dheefaha Carewell SEIU 503, oo sidoo kale hayso Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta.
Sababaha loola xiriiri karo Ameriflex:
Hubi hadhaaga kaadhkaaga Dheefta, dib u eeg taariikhda lacag bixinta, dalbo kaadhka beddelka, iwm.
Haddii kaadhkaagii ku haboona ee dheefaha la diiday oo aanad awoodin inaad lacag bixiso
Sheegashooyinka magdhawga caymiska caafimaadka ama kharashyada caafimaadka ee loo gudbiyay Ameriflex
Akhri su’aalaha caadiga ah ee ku saabsan dheefaha Caawimada Kharashka Daryeelka Caafimaadka Carewell ee qorshayaasha la ansixiyay. Arag Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.
Waa maxay Muddada Qorista Gaarka ah oo anigu miyaan u qalmaa mid?
Muddada Qoritsa Gaarka ah (“SEP”) ayaa kuu oggolaanaysa inaad iskaqorto qorshe caymis caafimaad oo ka baxsan Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee caadiga ah (Nof. 1 – Jan. 15 ee caymiska 2022). Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto SEP haddii aad la kulantay isbeddelo nololeed, sida inaad lumiso caymis ku salaysan shaqo, ama isbeddel dakhli oo kaa dhigaya inaadan u qalmin Medicaid.
Haddii SEP gaaga lagu ansixiyo Goobta Suuqa, waxaad iskaqori kartaa Qorshaha Goobta Suuqa laakiin waxaad haysataa waqti xaddidan oo aad iskuqorto, badanaa 60 maalmood laga bilaabo taariikhda dhacdada noloshaada u qalmitaanka. Goobta suuqu waxay sidoo kale u baahan doontaa caddaynta inaad u qalanto Muddada Qorista Gaarka ah, markaa waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso macluumaadkaas sida ugu dhakhsaha badan si aad u dhammaystirto qoritaankaada. Wixii kaalmo ah, wac 1-844-503-7348.
Miyaan u qalmaa celceliska magdhawga khidmadaha caymiska?
Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka haddii aad xaq u leedahay dheefaha Carewell SEIU 503 ka dib dhammaadka Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee u dambeysay oo aad iska qortay qorshaha aan la ansixinin ee Goob-Suuqeedka caymiska caafimaadka. Xaaladan, waxaad heli doontaa Kaarkaaga Dukaameysiga ee Dheefta si aad ugu bixiso kharashkyada jaabka aad ka bixiso ee caymiska leh. Waxaad sidoo kale xaq u yeelan doontaa magdhawga kharashyada khidmadaada caymiska ee ilaa iyo midkood
midka yar khidmadahaaga caymiska dhabta ah, ama
lacagta khidmada celceliska ah ee ay heleen adeeg bixiyeyaasha u qalma iyada oo loo marayo Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka.
Si aad u sii wadato helitaanka Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ka dib dhamaadka sanadka, waa inaad iska qortaa qorshe ceymis oo la oggolyahay sida ugu dhakhsaha badan ee suuragalka ah oo aan ka danbaynin Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah (inta u dhaxaysa Nofeembar 1 and Janaayo 15 ee caymiska 2022). Haddii kale, Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadku waxay joogsan doontaa dhammaadka sanadka.
Guji halkan si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah. Si aad u hubiso haddii aad u qalanto celceliska bixinta magdhawga caymiska, wac 1-844-507-7554, ikhtiyaar 3, ikhtiyaar 2.
Waa maxay khidmadaha caymiska caafimaadkayga saafiga ah?
Khidmada caymiskaaga saafiga ah waa qaddarka bishii ee ay tahay inaad siiso shirkaddaada caymiska si aad u ilaaliso caymiskaaga. Tusaale ahaan, haddii lacagta caymiska guud (qiimaha buuxa ee khidmadaha caymis sidahaaga) ay tahay $500 bishii iyo Caymiskaaga canshuurta daynta ee hore ama APTC (gargaarka maaliyadeed ee Dowladda Federaalka) ay tahay $200 bishii, khidmadahaaga saafiga ah ayaa noqon doona $300 bishii.
Sideen u isticmaalaa Kaarkayga Dukaameysiga ee Dheefta?
Kaadhkaagu wuxuu u shaqeeyaa sida kaadhka deynta caadiga ah, oo leh laba farqi oo muhiim ah:
1. Kaarkaagu isticmaalkiisu wuu xaddidan yahay, taasoo la macno ah inaad kaliya u isticmaali karto kharashyada la daboolay ee ku hoos qoran “Maxaan u isticmaali karaa Kaarka si aan u bixiyo?”
2. Kaarkaga kuma isticmaali kartid ATMka ama inaad dib u hesho lacag caddaan ah markaad wax iibsanayso.
Immisa lacag ah ayaa ku jirta Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta?
Waxa kaadhkaaga ku jira laba “akoon”. Hal akoon ayaa hore loogu shubay iyadoo ay la socoto qaddarka sanadlaha ah ee lagu bixinayo kharashyada caafimaadka iyo warqada dhakhtarku qoray, kuwa lagaa jarayo iyo kharashyada ceymiska ee adeegyada la daboolay iyo warqadaha daawoyinka. Sanadka 2022, lacagtaasi waa $6,600, laakiin tani way isbedeli kartaa sanadba sanadka ka dambeeya. Akoonka kale waxa lagu sii shubay qaddarka lagama maarmaanka u ah in lagu bixiyo khidmadaha saafiga ah ee bilaha ah: qaybta ceymiska caafimaadkaaga gaarka ah ee aan lagu daboolin cashuurta federaalka (APTC).
Waa maxay Lacagta Cashuurta Hormariska ah (APTC)?
Lacagta Cashuurta Hormariska ah (APTC) waa canshuur celin ay bixiso dawlada dhexe oo aad isticmaali karto si aad hoos ugu dhigto bixinta caymiskaaga billaha ah (loo yaqaano “khidmad”) markaad iskaqorto qorshaha goobta Suuqa Caymiska Caafimaadka. Canshuuur cellintaadu waxay ku salaysan tahay qiyaasta dakhliga iyo macluumaadka qoyska ee aad ku dhejisay codsigaaga goobta Suuqa. Haddii dakhligaaga lagu qiyaasay inuu u dhexeeyo boqolkiiba 100% iyo 400% ee Khadka Saboolnimada Federaalka, waxaad u qalantaa khidmada canshuur cellinta.
Qorshayaasha la ansixiyay ee 2022
Waxaad iska qori kartaa qorshe kasta oo caymis caafimaad oo aad ka rabto Goobta Suuqa. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u qalanto Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waa inaad doorataa qorshe la oggolaaday si aad caawimo uga hesho Carewell SEIU 503 bixinta khidmadahaaga caymiska iyo kharashka caafimaadka ee jeebka laga bixiyo.
CUSUB: Laga bilaabo Maajo 2022, guddiga wuxuu ansixiyay qorshe caymis caafimaad oo cusub oo loogu talagalay daryeel bixiyeyaasha dagan meel ka baxsan Agga adeegga Kaiser. Caymiskan cusub, ee diiwaangelinta cusub laga samayn karo Muddada Diiwaangelinta Gaarka ah waa Regence Standard Silver Plan Individual iyo Family Network – EPO (Aqoonsiga caymiska: 77969OR5290001). Qorshaha caymiska Regence waxaa la heli doonaa inta lagu jiro Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee caymiska 2023.
Sida qorshayaasha la ansixiyay loo go’aamiyo, halkan ayaa lagu qori doonaa. La cusbooneysiiyay: Maajo 23, 2022.
Soo dejiso PDF-ta caymisyada Oregon ee 2022 oo degmo ahaan ah (PDF)
Soo dejiso PDF-ta caymisyada Washington ee 2022 oo degmo ahaan ah (PDF)
Waxaad ka heli kartaa Soo Koobida Dheefaha iyo Caymiska qorshayaasha la oggolaaday halkaan.
Dooro Gobolkaada Asotin Baker Benton (Gudaha Adeegga Kaiser - AMA) Benton (Ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser - AMA) Benton (WA) Clackamas (Gudaha Adeegga Kaiser) Clackamas (Ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser) Clark Clatsop Columbia Coos Cowlitz Crook Curry Deschutes Douglas Franklin Gilliam Grant (OR) Grant (WA) Grays Harbor Harney Hood River (Gudaha Adeegga Kaiser) Hood River (Ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser) Island Jackson Jefferson Josephine King Kitsap Klamath Klickitat Lake Lane (Gudaha Adeegga Kaiser) Lane (Ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser) Lewis Lincoln Linn (Gudaha Adeegga Kaiser) Linn (Ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser) Malheur Marion (Ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser) Marion (Gudaha Adeegga Kaiser) Marrow (Ka baxsan Aagga Adeegga Kaiser) Multnomah Pacific Pierce Polk Sherman Skamania Snohomish Spokane Thurston Tillamook Umatilla Union Wahkiakum Walla Walla Wallowa Wasco Washington Whatcom Wheeler Yamhill
Qorshaha loo ansixiyay Multnomah County
KP OR Silver 2500/40, Aqoonsiga Qorshaha 71287OR0420011
Soo dejiso dukumiintiga Soo Koobida Dheefaha iyo Ceymiska ( PDF)
Qorshaha Loo ansixiyay Asotin County
Qorshaha Loo ansixiyay Washington County
Qorshaha loo ansixiyay Lane County (gudaha aagga adeegga Kaiser)
Qorshayaasha loo ansixiyay Lane County (dibada aagga adeegga Kaiser)
Regence Standard Silver Plan Individual and Family Network - EPO, Aqoonsiga Qorshaha 77969OR5290001
Qorshayaasha Loo ansixiyay Baker County
Qorshaha loo ansixiyay Benton County (gudaha aagga adeegga Kaiser – OR)
Qorshayaasha loo ansixiyay Benton County (dibada aagga adeegga Kaiser – OR)
Qorshaha Loo ansixiyay Benton County (WA)
Qorshaha loo ansixiyay Clackamas County (gudaha aagga adeegga Kaiser)
Qorshayaasha loo ansixiyay Clackamas County (dibada aagga adeegga Kaiser)
PacificSource OR Standard Silver Plan NAV, Aqoonsiga Qorshaha 10091OR0750013
Qorshaha Loo ansixiyay Clark County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Clatsop County
Qorshaha Loo ansixiyay Columbia County
Qorshaha Loo ansixiyay Coos County
Moda Health Beacon Silver 3000, Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1600002
Moda Health Oregon Standard Silver (Beacon), Aqoonsiga Qorshaha 39424OR1610002
Qorshaha Loo ansixiyay Cowlitz County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Crook County
Qorshaha Loo ansixiyay Curry County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Deschutes County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Douglas County
Qorshaha Loo ansixiyay Franklin County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Gilliam County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Grant County (OR)
Qorshaha Loo ansixiyay Grant County (WA)
Qorshayaasha Loo ansixiyay Harney County
Qorshaha Loo ansixiyay Grays Harbor County
Qorshaha loo ansixiyay Hood River County (gudaha aagga adeegga Kaiser)
Qorshaha loo ansixiyay Hood River County (dibada aagga adeegga Kaiser)
Qorshaha Loo ansixiyay Island County
Qorshaha Loo ansixiyay Jackson County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Jefferson County
Qorshaha Loo ansixiyay Josephine County
Qorshaha Loo ansixiyay King County
Qorshaha Loo ansixiyay Kitsap County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Klamath County
Qorshaha Loo ansixiyay Klickitat County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Lake County
Qorshaha Loo ansixiyay Lewis County
Qorshayaasha La ansixiyay Lincoln County
Qorshaha Loo Ansixiyay Linn County (gudaha aagga adeegga Kaiser)
Qorshayaasha loo ansixiyay Linn County (dibada aagga adeegga Kaiser)
Qorshayaasha La ansixiyay Malheur County
Qorshaha Loo Ansixiyay Marion County (gudaha aagga adeegga Kaiser)
Qorshayaasha loo ansixiyay Marion County (dibada aagga adeegga Kaiser)
Qorshaha La ansixiyay Morrow County
Qorshaha La ansixiyay Pierce County
Qorshaha La ansixiyay Pacific County
Qorshaha La ansixiyay Polk County
Qorshayaasha La ansixiyay Sherman County
Qorshaha La ansixiyay Skamania County
Qorshaha La ansixiyay Snohomish County
Qorshaha La ansixiyay Spokane County
Qorshaha La ansixiyay Thurston County
Qorshaha Loo ansixiyay Tillamook County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Umatilla County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Union County
Qorshaha Loo ansixiyay Walla Walla County
Qorshaha Loo ansixiyay Wahkiakum County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Wallowa County
Qorshaha Loo ansixiyay Wasco County
Qorshaha Loo ansixiyay Whatcom County
Qorshayaasha Loo ansixiyay Wheeler County
Qorshaha Loo ansixiyay Yamhill County